သတင်းထူး စမူဆာခွန်ပြည်နယ်ရှိရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် - MitrThai.com
19 February 2021 19 February 2021 system ข่าวสาร, ประกาศ
📢📢🔥 သတင်းထူး စမူဆာခွန်ပြည်နယ်ရှိရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် 🔥📢📢 ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆို သင်၏အလုပ်ရှင်မှ လုပ်ငန်းခွင်တွင် သင့်အားကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါအခမဲ့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးရန် တော်ဝင်ထိုင်းအစိုးရကို တောင်းဆို နိုင်သည်ကို သင်သိပါသလား? စာရင်းသွင်းရန်အတွက် လိုအပ်ချက်/သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အဆင့်များကိုဤနေရာတွင်ရှာဖွေပါ⬇️
1. ၀န်ထမ်း ၅၀ ကျော်ခန့်ထားသည့်အလုပ်ရှင်သည်သာလျှင် ထိုင်း (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား များအတွက် ကိုဗစ် ၁၉ အခမဲ့စစ်ဆေးမှုကို မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။
2. ဤအစီအစဉ်အရ အလုပ်ရှင်မှသာလျှင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ အခမဲ့စစ်ဆေးမှုအားပြုလုပ် ရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်တောင်းဆို၍မရနိုင်ပါ။
3. ကိုဗစ် ၁၉ အခမဲ့စစ်ဆေးခြင်းအား လုပ်ငန်းခွင်၌မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးလိုပါက ထိုင်းနိုင်ငံသား မဟုတ်သည့်သူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ရွေးချယ်ထားသောရွေ့လျားကျန်းမားရေးသီးသန့် ဌာန/ယူနစ်များတွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သည့်သူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ရွေးချယ်ထားသောရွေ့လျားကျန်းမားရေးသီးသန့်ဌာန/ယူနစ်များ၏အချက်အလက်နှင့်နေရာကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက စမူဆာခွန်ကိုဗစ်-၁၉ အထူးလိုင်း/Hotline သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ ထိုင်းအော် ပရေတာသည် ထိုင်းစကားတစ်မျိုးထဲသာပြောကောင်းပြောနိုင်သည့်အတွက် ဖြစ်နိုင်လျှင် အထူးလိုင်း/ hotline အားဆက်သွယ်သည့်အခါ ထိုင်းလူမျိုးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဉီးဉီးအား အကူအညီတောင်းပါ။
4. လုပ်ငန်းခွင်၌ ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးမှုအတည်ပြုကြောင်း အလုပ်ရှင်မှသင့်အားအသိပေးပါက သင့်အနေဖြင့် https://bit.ly/3qdPZQB ရှိ ပုံစံ ၂ အားဖြည့်စွက်ရပါမည်။ဤပုံစံကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤပုံစံတွင်သင်၏အိမ်ထောင်စုဝင်များ၏အမည်များနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်ပတ်သက် ၍မေးမြန်းထားသည်။ ပုံစံအား မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြည့်စွက်၍လုပ်ငန်းခွင်၌ ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးသည့် နေ့တွင် သင်နှင့်အတူယူဆောင်လာပါ။
5. လုပ်ငန်းခွင်၌ ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးသည့်နေ့တွင် စစ်ဆေးမှုအားစီမံခန့်ခွဲသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများထံသို့ သင်၏မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများ (ဉပမာ-ပတ်စပို့စ်၊ပန်းရောင်ကဒ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား)တို့ကိုပြသရမည်ဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စွက်ထားသည့် ပုံစံ၂ အားတင်ပြရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသည် သင်တို့၏အမည်များနှင့်အိမ်ထောင်စုအချက် အလက်များအား ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးမှုခြေရာခံရန်အတွက်သာမှတ်တမ်းတင်ထားလိမ့်မည်။
အကယ်၍သင့်တွင်မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက စမူဆာခွန်ကိုဗစ်-၁၉ စင်တာသို့ဆက်သွယ်ရန်၀န်မလေးပါနဲ့နော်
☎️ 065-549-3322; ☎️ 098-872-6632 (၂၄ နာရီ)
#စမူဆာခွန်ပြည်နယ်ပြည့်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန # စမူဆာခွန်ပြည်နယ်